Joker On Lawn wuxuu ka baqi doonaa cadaabta ka baxsan daweynta Trick R '- iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Joker On Lawn wuxuu ka baqi doonaa cadaabta ka baxsan daweynta Trick R '
Joker On Lawn wuxuu ka baqi doonaa cadaabta ka baxsan daweynta Trick R '
'Dhimashada Qoyska,' Joker wuxuu sameeyaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waalan ee uu abid sameeyo. Wuu ku amraa qof inuu wajigiisa ka jaro. Markaasuu si foolxun isugu dayayaa inuu dib ugu dhejiyo. Kinda waalan, sax? Waxaan ula jeedaa ugu yaraan xoogaa yar?
Hagaag ThinkGeek wuxuu siiyay taageerayaasha Joker hadiyad sii wadi doonta bixinta. Joker cabsi leh ayaa loo qaabeeyey ka dib muuqaalkiisa 'Dhimashada Qoyska.'
36 x 24 x 10 inch qurxinta cowska creepy creepy cows, waa hubaal inuu cabsi gelin doono cadaabta khiyaanooyinka r 'daweynta, xitaa Gotham. Waxay ka kooban tahay Joker-ka oo ku dhejinaya cawska oo dhameystiran oo leh indho duurjoog ah iyo dhoola cadeyn rictus ah. Isagu waa $ 89 oo waa la iibsan karaa isla markaaba HALKAN.
BatmanWejiga DamiGothamJoker The
Farshaxaniiste Ayaa Soo Saaray Astaamo Argagax Leh Sida Ilmo Caan Ah Oo La Qarxiyo
Freddy Krueger cusub POP! Vinyl Toy Waxyaabaha Lagu Sifeeyo Gacmo gashi